CIO: hahemotra amin’ny taona 2026 ny lalao olympika ho an’ny tanora - ewa.mg
News - Sport - CIO: hahemotra amin’ny taona 2026 ny lalao olympika ho an’ny tanora
Nanaiky ny fangatahan’i Se­negaly
ny eo anivon’ny Komity iraisam-pirenena Olympika, ny amin’ny tokony
hanemorana ny lalao olympika ho an’ny tanora, kasaina hatao ny 22
oktobra hatramin’ny 9 novambra 2022 any Dakar, Senegaly. Mano­loana
ny fanambaran’ny filohan’ny CIO, i Thomas Bach, fa hahemotra
efa-taona ity lalao ity, ka amin’ny taona 2026 ny hanatanterahana
izany. Noha­mafisiny, efa nifandinihana nandritra ny fihaonan’ny
komity mpanatanteraka eo anivon’ny CIO izao fanapahan-kevitra
Noho ny antony ara-pahasalamana sy ny krizy aterak’izany no tena
anton’ny nangatahan’ny filoha senegaley, Macky Sall, ny fanemorana.
Fanemorana ha­hafahan’ny CIO, ny Komity na­sionaly ary ny
federasiona iraisam-pirenena, mampitombo ny ezaka hanomanana ity
lalao olympika ho an’ny tanora ity. To­raka izany koa ny firenena
senegaley, afaka manatsara ny fandraisana ny fifaninanana.
Tsiahivina fa nankatoavina, omaly, ity fanemorana ny lalao olympika
ho an’ny tanora ity, nifaneken’ny filohan’ny CIO, i Thomas Bach sy
ny filoha senegaley, Macky Salle. Hohama­fisina, anio zoma 17
jolay, mandritra ny fivorian’ny komity iraisam-pirenena Olympika
kosa izany fanapahan-kevitra izany, araka ny loharanom-baovao.
L’article CIO: hahemotra amin’ny taona 2026 ny lalao olympika ho an’ny tanora a été récupéré chez Newsmada.
Ambolomadinika: andian-jiolahy ravan’ny polisy
Noraisim-potsiny ireo andian-jiolahy tompon’antoka tamin’ny halatra miharo vaky trano tao amin’ny fokontany Ambolomadinika Toamasina, ny talata lasa teo. Nisy tonga nametraka fitarainana teo amin’ny kaomisarian’ny polisy ao Mangarano Toamasina fa nisy namaky ny tranony, ny alatsinainy alina teo. Rehefa natao ny fikarohana, nahazo loharanom-baovao ny polisy ka nametraka ny vela-pandrika hahafahana misambotra ireo jiolahy. Tratra tao Ambolomadinika ny iray miaraka amin’ny entana halatra avy nangalariny. Nitohy ihany ny fikarohana ka tratra tao Tanambao Fahadimy ny jiolahy roa hafa miaraka amin’ny caméra, écran ary entana sarobidy marobe. Teo anatrehan’ireo porofo teo am-pelatanany, niaiky ireto jiolahy ireto fa ry zalahy no tompon’antoka tamin’ny famakiana ilay trano tao Ambolomadinika ary mbola misy naman’izy ireo niaraka nandray anjara tamin’ity halatra sy vaky trano ity. nilaza izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa eny amin’ny fokontany Ambolomadinika sy Mangarivotra no tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Nanentana hatrany ny polisy mba tsy hisalasala hiantso azy ireo amin’ny laharana telefaonina finday 034 05 703 86 na 034 49 714 15 raha mahita tranga mampiahiahy.Sajo sy J.CL’article Ambolomadinika: andian-jiolahy ravan’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Vokatry ny fanamboaran-dalana eny Ankadilalana, mitsofoka eo amin’ny hopitaly Befelatanana, Fiadanana (Fort Voyron ireo fiara any Anosy te ho any Tsimbazaza). Na mihazo ny lalana Andrefan’Ambohijanahary, Soanierana, Tsarafaritra. Ireo fiara avy any Tsimbazaza ho any Anosy kosa dia miakatra Fiadanana, Soanierana, Andrefan’Ambohijanahary…L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Hetra alaina amin’ny karama (Irsa): kajina ny fomba hanamaivanana ny mpiasa
Nanova fomba fikajiana ny hetra alaina amin’ny karama ny Foibe sampandraharahan’ny hetra (DGI), noho ny krizy nateraky ny Coronavirus. Izany no natao ho fampihenana ny vola alaina amin’ny mpiasa sy fampitomboana ny vola miditra aminy, hoy ny tale jeneralin’ny hetra, i Germain.Manomboka amin’ity taona 2021 ity, miova ny fomba fikajiana ny hetra ampiharin’ny DGI. Raha teo aloha, mizara roa ihany, karama latsaky ny 350 000 Ar, 0 %, mihoatra izay, 20 % . Ankehitriny kosa, mizara dimy ny fomba fikajiana ny hetra alaina amin’ny karaman’ny mpiasa. “Farafahakeliny 2 000 Ar ho an’izay mandray latsaky ny 350 000 Ar ho mariky fandraisana anjara ho an’ny tanindrazana”, hoy ny tale jeneralin’ny hetra. Somary manahirana kely ny fikajiana azy, jerena araka ny fahafahan’ilay mpandoa hetra, mbola mety tafiditra anaty kajy koa ny vesatra isan-karazany, ohatra, ny isan’ny zaza ateraka. Nomarihin’ny DGI fa manomboka izao, handoavan-ketra ny tambin-karama raha mihoatra ny karama raisina ao anatin’ny herintaona.Nitondran’ny DGI fanazavana ny “e-hetra phone”, fomba fandoavan-ketra vaovao. Isan-taona, mampahafantatra mpitantana ny orinasa ny ao amin’ny DGI momba ny hetra, ary mandray fanamarihana na tolo-kevitra avy amin’izy ireo, toy ny Vondron’ny orinasa eto Madagasikara (GEM). “Mpiara-miombon’antoka amin’ny fanjakana ny sehatra tsy miankina amin’ny fandoavan-ketra, koa misy miainga avy amin’ny tolo-kevitr’izy ireny ny famolavolana ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana. Tsy voatery vita daholo anefa fa alefa tsikelikely”, hoy ihany ny talen’ny hetra.Marihina fa tambajotra iray ao amin’ny DGI ny e-hetra. Avy amin’izany ny hitateran’ny mpandoa hetra ny momba azy, tsy mila mankany amin’ny ivonketra intsony. Mampisy fifampitokisana, indrindra, tsy hisian’ny kolikoly sy azo antoka ny vola miditra amin’ny fanjakana. Tsy maintsy ampiharina ny e-hetra, ary any amin’ny faritra manomboka amin’ity taona ity. R.Mathieu L’article Hetra alaina amin’ny karama (Irsa): kajina ny fomba hanamaivanana ny mpiasa a été récupéré chez Newsmada.
Na tsy mbola omen’ny Ma­la­gasy lanja loatra aza, iray amin’ ireo mpirakitra tantara tsy miangatra ny sary. Anisan’izany ny saripika, izay efa namakivaky an­jato taona teto Madagasikara. Ankehitriny vao manomboka mahatsapa io anjara andraikitry goavana tazonin’ny sary io ny ankamaroan’ny Malagasy. Mi­ainga any amin’ny ankohonana, mipaka hatrany amin’ny firenena sy ny tantara maneran-tany, voarakitra anaty sary. Milaza sy mahalaza zavatra maro izy ireny. Ahafantarana sy hahafahana mametra na mihazona ny fototra ijoroana ihany koa. Hoenti-mamolavola ny ho avy any aoriana. Ahafantarana ny fo­­mba amam-panao, ny kolontsaina, ny fomba fiaina, ny rafitra mifehy ny fiaraha-monina, sns. Fantatra fa na eo aza ilay fitodihana tsikelikely any amin’ny sary fahiny, mbola vitsy iha­ny ny Malagasy manao fikarohana miainga avy amin’ny alalan’ireny sary ireny. “Saika porofo madinika ihany no ilain’ny Malagasy ny sary fahiny fa matetika, ny soratra no ifotorany bebe kokoa”, hoy Ranarijesy Elodie, mpianatra tantara. No­ma­rihiny anefa fa “na ny tranga faran’izay madinika indrindra eo amin’ny fiarahamonina aza, tazana anaty sary avokoa”. Tsetsatsetsa tsy aritra no nilazany fa “faran’izay manana ny lanja sy toerana sahaza azy ny sary… Manamarina izany ny fisian’ny fakantsary etsy sy eroa any amin’ireny toerana misy zava-tsarobidy arovana ireny”!HaRy RazafindrakotoL’article Tahiry sy lovantsofina : afaka manambara tantara ireo sary fahiny a été récupéré chez Newsmada.
Namoaka antso fitadiavana mpiasan’ny fahasalamana, izay hanampy amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, ny fanjakana. Mpitsabo ankapobeny miisa efatra ambin’ny folo amby zato sy mpanampy mpitsabo folo sy roanjato no amoahan’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka antso. Haparitaka any amin’ireo toeram-pitsaboana fototra (CSB) handraisana mararin’ny Covid-19 eto amin’ny faritra Analamanga sy any Alaotra Mangoro ireo mpiasan’ny fahasalamana hokaramain’ny fanjakana ireo. Hodinihina ny fifanarahampiaraha-miasa amin’ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy vaovao horaisin’ny fanjakana ireo. « Mpitsabo dimampolo no halefa any Alaotra Mangoro ary haparitaka eto Analamanga ny efatra amby enimpolo ambiny. Ny iraika amby roapolo amby zato amin’ireo mpanampy mpitsabo kosa no halefa any Alaotra Mangoro raha toa ka hiasa eto Analamanga ny sivy amby valopolo. Hiaraha-midinika amin’ny mpiasa hokaramaina kosa ny fifanaraham-piarahamiasa hapetraka », hoy ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly. Hanampy amin’ny fanatanterahana ny tetikasa momba ny fanjarian-tsakafo antsoina hoe « Tetikasa Fafy », izay vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola, ihany koa ireo mpiasan’ny fahasalamana telonjato mahery ireo. « Samy hafa amin’ny fanampiana amin’ny ady amin’ ny Covid-19 mihitsy ny fifanaraham-piaraha-miasa ho an’ny tetikasa Fafy. Hanasonia fifanarahana vaovao haharitra herintaona, eny am-piandohana, ny mpampiasa sy ny olona hokaramaina. Hotazonina ho mpiasa maharitra kosa izay mahafa-po, aorian’izay », hoy hatrany ny loharanombaovao. Fifanarahana hafa Tsiahivina fa tamin’ny herinandro lasa teo no efa nanao antso fahalinana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana miisa dimy amby efapolo, izay halefa any Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Diana, Ihorombe, Menabe ary Melaky, ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Mbola hitohy ny antso tahaka izao noho ny fanatevenan-daharana amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Fantatra fa hisy indray, atsy ho atsy, ny fitadiavana mpiasa an-jatony halefa any Bongolava. L’article Fitsaboana ny covid-19 :: Mitady mpitsabo sy mpitsabo mpanampy 324 ny fanjakana est apparu en premier sur AoRaha.
Sehatra tsy miankina: 73,8 miliara Ar ho an’ny herinaratra
GreenYellow, Axian, Société Générale, GuarantCo sy African Guarantee Fund nifanaraka hanatevina 73,8 miliara Ar ho an’ny foibe famokarana angovo lehibe indrindra eto Madagasikara, miasa any Ambatolampy nanomboka tamin’ny 2018. Famatsiam-bola be indrindra ihany koa ho an’ny famokarana angovo azo havaozina. Manana traikefa manokana amin’izany ny GreenYellow, tohanan’ireo mpiara-miombon’antoka hafa ireo, mitondra izay anjara tandrify azy avy.51 % ny anjaran’ny Axian amin’ity foibe famokarana herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro ity. Société Générale miara-mampindrana amin’ny BNI sy ny BMOI, mampindrana 16,2 tapitrisa euros. GuarantCo, manome 36,9 tapitrisa ariary, sy African Guarantee Fund, manome 14,8 miliara ariary. Ankoatra ny fampiasam-bola ao amin’ilay foibe famokarana angovo ao Ambatolampy, miteraka tetikasa vaovao ny ataon’ny GreenYellow hanenjehana 80 % ny angovo azo havaozina alohan’ny 2030 sy manatsara ny famatsiana herinaratra.Mila fandraisana anjaran’ny sehatra tsy miankina ny famatsiana herinaratra, izay mbola mibahan-toerana amin’izao fotoana izao ny famokarana mandeha amin’ny solika. Vahaolana hisorohana ny tsy fahampiana na fahatapahana matetika ny angovo azo havaozina, ka ireo sehatra tsy miankina voalaza eto, tsy ahafahan’ny Malagasy mampiasa herinaratra vaovao fotsiny fa ahafahana mamatsy angovo azo antoka sy madio, mivoatra, araka namaritan’ny Firenena mikambana ho an’ny fampandrosoana maharitra. Herinaratra amin’ny vidiny mora ho an’ny tokantrano sy orinasa ary miteraka asa maro. Mampihena 17000 t CO2 isan-taona ny foibe ao Ambatolampy. R.MathieuL’article Sehatra tsy miankina: 73,8 miliara Ar ho an’ny herinaratra a été récupéré chez Newsmada.
591ny mpiasam-panjakana tsy handray intsony karama amin’ity volana oktobra ity ary hiakatra filankevi-pifehezana, araka ny tatitra nivoaka tao amin’ny filankevitry ny minisitra farany teo teny Iavoloha. Rehefa nampiasana ny « logiciel Augure” hanisana ireo mpiasam-panjakana manerana ny Nosy isaky ny minisitera, nivoaka ireo olona ireo izay mandray karama isam-bolana nefa tsy miasa na koa tsy voaisa ho ao anatin’ny mpiasam-panjakana ara-dalàna. Mahatratra 7 007 ny olona hafa ankoatra ireo mbola eo am-panamarinana ny momba azy eny anivon’ny fitantanambola. Politikan’ny fanjakana ny hanadio ny lisitry ny mpiasam-panjakana tena izy sy ireo mpisandoka nefa mandray vola tsy tapaka.Nikarakara antontan-taratasy avokoa ny mpiasam-panjakana isaky ny minisitera hanamarinana fa miasa ao amin’io minisitera io ary manana laharana maha mpiasam-panjakana azy. Efa an-taony maro ny nanomboka ny fanadiovana niarahana amin’ny minisiteran’ny Asa sy ny asam-panjakana.Vonjy L’article Mpiasam-panjakana miisa 591 ho tapaka karama a été récupéré chez Newsmada.
Sécurité présidentielle : Des généraux fouillés
Le président Andry Rajoelina, chef suprême des Forces armées, a fait le déplacement à Antsirabe hier pour assister à la cérémonie Fandresena 2021 qui marque la sortie officielle de la 42ème promotion de l’Académie militaire baptisée Général de Corps d’Armée Ismaël Mounibou. Il s’agit de la première sortie en public du chef de l’Etat après l’interpellation d’un groupe d’individus soupçonnés d’avoir fomenté un attentat contre sa personne. Une cérémonie qui s’est déroulée sous très haute sécurité. En effet, face aux menaces, des dispositifs de sécurité particulière ont été pris lors de cet évènement. Une forte équipe de la direction de la sécurité présidentielle a fait le déplacement dans la ville d’Eaux. Les hélicoptères de l’Armée ont même été mobilisés pour superviser les déplacements du président de la République depuis son arrivée à l’aéroport jusqu’à l’enceinte de l’ACMIL. Tous les invités sans exception, y compris les officiers généraux, ont subi des fouilles minutieuses. La garde présidentielle était sur le qui-vive. Vérification stricte par un élément de la DST, des armes des élèves officiers de la 44ème promotion qui ont effectué une démonstration des techniques de riposte contre les attaques des dahalo. Même protocole pour les élèves officiers qui ont participé au défilé militaire. Après ce projet d’attentat déjoué, l’on constate que les responsables ont décidé de renforcer la sécurité d’Andry Rajoelina. A noter qu’après cette cérémonie à l’ACMIL, le numéro Un d’Iavoloha a tout de suite repris le vol pour rentrer à Antananarivo. Davis RL’article Sécurité présidentielle : Des généraux fouillés a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra: niverina amin’ny tanjany i Thomas Fontaine
Tompon-toerana niaraka tamin’ny klioban’ny Fc Lorient i Thomas Fontaine, vodilaharana anisan’ny andrarezina mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, afakomaly. Niara-niakatra kianja taminy nandritra izany i Jeremie Morel, izay samy anatin’ ny Barea, amin’izao fotoana. Nifandona tamin’ny klioban’ny Fc Nantes tao amin’ny kianjan’i Moreau-Desfarges nandritra ny lalao ara-pirahalahiana izy ireo ka nivoaka mpandresy tamin’ny isa 1 no ho 0 tamin’izany ny Fc Lorient. Niverina tamin’ny tanjany tanteraka i Thomas fontaine, taorian’ny ratra nahazo teo amin’ny “tendon d’achille”, ny volana janoary lasa teo ka tsy niakarany kianja nandritra ny enim-bolana. Na izany aza, azo heverina fa afaka hiatrika ny lalao fifanintsanana miaraka amin’ny Barea amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany tontosaina any Qatar, ny taona 2022 ity vodilaharana ity.Tsiferana R.L’article Kitra: niverina amin’ny tanjany i Thomas Fontaine a été récupéré chez Newsmada.
Nitsoraka teny amin’ny ranon’Ikopa…: tratra ireo andian-jiolahy mpangalatra moto
Saron’ny polisin’ny UIR sy ny Sut Tsaralalana, afakomaly teo teny amin’ny lalana Digue, ireo efa-dahy malaza ratsy amin’ny halatra moto. Ireo polisy manao sakana eny Andohatapenaka no sendra nandalo ireo moto ka niroso amin’ny fisavana ny polisy. Tsy nety nijanona anefa ilay mpitondra moto. Raikitra ny fifanenjehana ka nitsoraka teny amin’ny ranon’Ikopa ilay mpitondra moto. Noraisim-potsiny tao anaty rano. Niainga tamin’ny fanadihadiana azy no nahafahana nisambotra ireo namany. Nahitana basy vita gasy tany aminy.J.CL’article Nitsoraka teny amin’ny ranon’Ikopa…: tratra ireo andian-jiolahy mpangalatra moto a été récupéré chez Newsmada.